Nici fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny Cuvântul de citire statistică
1.1 Valea Manomeza
1.2 Rater de hârtie
1.3 Statistici Statistici de lizibilitate
Noho ny fahafahanao mahalala ny dikan’ny teny ohatra, dia tsy midika izany fa ny mpamaky no ho tonga saina avy hatrany. Azonao atao ny mamantatra hoe ahoana nu famakiana ny lahatsoratrao miaraka amin’ireo fomba maromaro samihafa.
Ny iray amin’ireo fomba haingana indrindra hahitana ny fomba nanoratanao ny mpamaky anao dia ny manontany azy ireo fotsiny. Azonao atao eray amin’ny alàlan’ny:
Pluginuri Mametraka mifandraika amin’ny WordPress blogo. Manontany fotsiny raha mora vakina ny lahatsoratra. Eny sa tsia.
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina hoe Hârtie Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo, indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamela ny fanovana betsaka araka ny maika Hârtie Rater ity manaraka ity:
Cel mai bun din toate? Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra. Raha te hahazo dikan-doka tsy misy adiresy ianao, dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Statistici Statistici de lizibilitate
Mihoatra noho ny azo inoana, dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao. Na izany aza, azonao atao koa ny manome lalana ny Flesch Citește Ease sy Flesch-Kincaid Nivel de nivel în Microsoft Microsoft Word.
Rehefa vita ny safidy vaovao dia tsindrio eo amin’ny "Fisehoana" eo amin’ny ilany had (jereo ny sary etsy ambany).
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny sapa "Rehefa ny fitipi-pitenenana sy ny fifehezana amin’ny Teny" dia tokony hanamarina boaty roa.
Kitiho ny boaty "O.K".
Ankehitriny, ny fahatakarana ny isa amin’ny Flesch Citirea diagramei sarotra, saingy tsy sarotra loatra. Ny Microsoft dia manazava amin’ny antsipiriany momba io